Maalinta: Sebtember 17, 2019
Natiijada Tijaabada Awoodaha Mortared Père ee kuxirmayaasha Xargaha ee kuyaala Khadka Ankara-Kayseri
Khadka Ankara-Kayseri ee ku yaal darbiyada hoostiisa ee loo yaqaan 'Pere Coating' ee qandaraaska natiijada ka dhalatay Jamhuuriyadda Raulways ee Gobolka 2. 2019 / 386337 GCC qiimaha xadka 903.112,88 TL iyo qiyaasta qiimaha ee Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobolka (TCDD) [More ...]
Dhallinyarda Wadada ayaa Heshay Muuqaalo Cusub
Kadib dhismaha wadooyinka iyo dariiqooyinka oo ay fuliyeen Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ee ku taal Wadada Anıt Street, Anıt Street iyo Gençlik Street, howlihii wadada ayaa la dhammeeyay. Anitkabir waxay leedahay kun mitir 950 oo dherer ah [More ...]
Diyaargarow dhammaystiran oo Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub ee Ankara
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhameystirtay u diyaar garowgeeda “Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub oo la qabtay intii u dhaxeysay Sebtember iyo Sebtember sanad walba, kaasoo ku dhiiri gelinaya magaalooyinka iyo degmooyinka inay qaadaan oo taageeraan tillaabooyin gaadiid oo waara. Ankara Weyn [More ...]
Majirto Dul marin u Baaba'aan Badda Mersin
Dowlada hoose ee Mersin ma bixiso marin-biyoodka badaha. Waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Adeegyada Badaha iyo Maareynta laanta Kormeerka ee Dowlada Hoose si looga hortago wasakhowga [More ...]
Agaasimayaasha IETT waxay ku safreen metrobus iyo basas iyagoo raacay amarrada Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu. Maalmihii ugu horreeyay ee tababbarka dhageysiga xafiisyada ee Istanbul, waxay taageero siinayeen kormeerayaasha garoonka. Iyada oo la furayo sannad dugsiyeedka tababbarka ee 2019-2020 ee magaalada Istanbul, 3 [More ...]
Gawaarida Tareenka ee Xamuulka ayaa lagu daadiyay Mersin
Gawaarida xamuulka ee xamuulka qaada ee degmada Tarsus ee Mersin ayaa ku dhacay sabab aan la shaacin. Sida ay sheegayaan wararka la helay, qaar kamid ah gawaarida xamuulka qaada ee laga raaco Mersin ilaa Adana, Tarsus Station halka ay kusii jeedaan sabab aan wali la shaacin [More ...]
IMM waxay ku dhawaaqeysaa tirada isticmaaleyaasha metrooga habeenkii
İBB waxay shaacisay tirada isticmaaleyaasha Habeenki xalay. IMM SözcüMurat Ongun, mashruuca safarka saacadaha 24 ee Istanbul ka dib codsigii tareenka dhulka hoostiisa ee habeenkii wuxuu ku dhawaaqay in ku dhow 50 kun oo qof. Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Sözcüs [More ...]
Khadkii Tareenka oo Batman u qeybiyey labo dhibaato oo saameyn xun ku yeeshay Gaadiidka
Khadadka tareenka ee u kala qaybiyey Batman laba qaybood ayaa u keenaya gaadiidka inay istaagaan magaalada inta lagu guda jiro marinnada xamuulka iyo rakaabka. Gawaarida waxay sugayaan daqiiqado marinka tareenka, ambalaaska ama gawaarida dab damiska hadii ay dhacdo taraafikada [More ...]
MDTO, Group Working Gaadiidka shirka Turkey France-to marti Sameynta
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ", ay sameeyeen shirka labaad ee Group Working Gaadiidka Turkey-France ee" ee Mersin Rugta ciidammada. Barnaamijka 2-maalin ah horumarinta ganacsiga ee ka dhexeeya Turkey iyo France [More ...]
RayHaber 17.09.2019 Warbixinta Shirka
Hawlaha kaabayaasha ah ee Fidinta Savaştepe Saldhigyada Wadooyinka Wejiga Dhiibida Jaan gooynta ee Khadka Tekirdağ-Muratlı
DHL Express waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee gaadiidka duulista hawada ee caalamiga ah oo ay soo saarto Wasaaradda Ganacsiga, oo siisa shirkadaha fududeyn iyo mudnaan u leh ruqsadda kastamyada, oo caalami ahaan loo aqoonsan yahay “Shahaadada Maskax Ahaan Ruqsad Leh”. Dunida ugu horumarsan caalamka [More ...]
Dhacdooyinka Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa ee Yurub ee Gaziantep
Dowlada Hoose ee Gaziantep waxay biloowday howlihii Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa ee Yurub oo loogu dabaaldegi doono halku dhigyada "Socodka Badbaadada iyo Baaskiilka" sanadkan. Duqa Magaalada Fatma Şahin, Gudoomiyaha Gaziantep Davut Gül iyo qaar kaloo badan [More ...]